Monday April 16, 2018 - 12:40:30 in Wararka by Super Admin
Maamulka isku magacaabay Puntland ee ka jira gobollada waqooyi Bari Soomaaliya ayaa beeniyay warar maalmahan laysla dhaxmarayay oo sheegayay in dowladda imaaraatka ay isaga baxday Boosaaso.
Cabdi Wali Gaas oo warbaahinta kula hadlay xarunta gobolka Bari ayaa sheegay in xiriirka kala dhaxeeya dowladda Imaaraatka Carabta uu yahay mid heer sare ah isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in ay xiriirka ujareen.
” waxaan idiin sheegaya in aan dowladda Imaraadka ka codsanay in ay sii wadaan tageeradda iyo tababaridda ciidankeena badda iyadoo lasii xoojinayo gacan siinta mashruuca,waxaad lasocotaan in dowladda imaraadku Puntland ka wadaan mashariic dhaqaale badan galayo,majirto cid noo badelaysa booska ay noo jogaan imaraadku,mana jirto cid noola siman” ayuu yiri Gaas.
Wuxuu ku dheeraaday ammaan uu ujeediyay dowladda Imaaraatka Carabta oo uu ku sifeeyay dowlad saaxiib ah isagoo ugu baaqay maamulayaasha Abu Dhabi in ay sare usii qaadaan tababaridda ay siiyaan ciidamada maamulkiisa.
Maalmo ka hor ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso lagu xayiray diyaarad dowladda imaaraatka carabta leedahay oo doonayay in agab melleteri ay dhoofsadaan.
Shirkadda Dekadaha caalamiga Dubai ayaa gacanta ku heyso Marsooyinka Berbera iyo Boosaaso balse waxaa jira khilaaf daran oo u dowladda Imaaraatka kala dhaxeeya Hoggaanka DF-ka Soomaaliya.